कांग्रेसले अन्य पार्टीबाट आएका ८० हजारलाई क्रियाशील सदस्यता दिने | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more कांग्रेसले अन्य पार्टीबाट आएका ८० हजारलाई क्रियाशील सदस्यता दिने
पुस २५ गते, २०७७ - ०७:५५
काठमाडौं । कांग्रेसमा विलय भएका दल र नेता–कार्यकर्ताको समायोजनको विवाद मिलेको छ । ०७४ को आमनिर्वाचन र त्यसयता कांग्रेसमा विलय भएका राजनीतिक दल र दल परित्याग गरी प्रवेश गरेका नेता–कार्यकर्ताको विषयमा दुई वर्षदेखिको विवाद टुंगिएको हो । अब ती नेता–कार्यकर्ताले क्रियाशील सदस्यता पाउने बाटो खुलेको छ ।
आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ – केन्द्रीय कार्यसमितिले त्यस्ता नेता–कार्यकर्ताको समायोजनका लागि २० कात्तिक, ०७५ मा उपसभापति विमलेन्द्र निधिको संयोजकत्वमा अन्य राजनीतिक दल समायोजन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा उपसभापति विजयकुमार गच्छदार, सहमहामन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र केन्द्रीय सदस्यद्वय महेश आचार्य र दीपक गिरी सदस्य थिए । समितिले दुई वर्ष लगाएर सहमति जुटाएपछि केन्द्रीय समितिमा पेस गरेको नीतिगत निर्णयलाई आइतबारको बैठकले पास गरेको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए ।
गत ११ असोजमा पौडेल पक्षले उठाएका १६बुँदे मागमध्ये समायोजनको मुद्दा पनि महत्वपूर्ण एक हो । अन्य राजनीतिक दलबाट प्रवेश गरेका नेता–कार्यकर्तालाई विधानबमोजिम पारदर्शी रूपमा सदस्यता दिनुपर्ने पौडेल पक्षको माग थियो । विधानबमोजिम तल्ला तहबाटै सिफारिस भएर आएपछि मात्रै सदस्यताको टुंगो लाग्ने गरी नीतिगत सहमति भएको केन्द्रीय सदस्य नवीन्द्रराज जोशीले बताए । ‘नीतिगत निर्णय भएको छ, तर मुख्य कुरा व्यवहारको हो । अब त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन कसरी हुन्छ ? भन्ने कुरा हो,’ जोशीले भने ।
यस्तै, राप्रपाबाटै आएका दिलीप राई झापा, आशाराम चौधरी कैलाली र राजेशबहादुर सिंह कपिलवस्तुलाई आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत भएका छन् । जसमा राजपाबाट प्रवेश गरेका सर्लाहीका जंगीलाल राय र राप्रपाबाट आएका डोल्पाका कर्णबहादुर बुढा केन्द्रीय सदस्य मनोनीत भएका छन् भने माओवादी छाडेर आएका सर्लाहीका शम्भुलाल श्रेष्ठ, डडेल्धुराका जनकलाल कलौनी, समाजवादीबाट आएका कपिलवस्तुका अभिषेकप्रताव साह, एमालेबाट आएका कैलालीका मोहनसिंह राठोर, तत्कालीन नयाँ शक्तिबाट आएका स्याङ्जाका भूमिबहादुर गुरुङ, अखण्ड नेपालका कुमार खड्का र अखण्ड नेपाल समानान्तरका दयाराम पाण्डे आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत छन् ।
समायोजन समितिले गच्छदारको पार्टीका ५१ जिल्लाका २५ हजार चार सय ६८ जनालाई क्रियाशील सदस्यताका लागि सिफारिस गरेको छ । यस्तै, सहमहामन्त्री सुनीलबहादुर थापाले क्रियाशील सदस्यताका लागि ४८ जिल्लाका दश हजार सात सयजनाको नामावली बुझाएका छन् । त्यसबाहेक सबैजसो जिल्लाबाट अन्य पार्टीबाट प्रवेश गरेकाहरूको विवरण प्राप्त हुने क्रम रहेको र सूची तयार भइरहेको कांग्रेसका सूचना अधिकारी केशव रिजालले जानकारी दिए ।
आजदेखि दोस्रो चरणको आन्दोलन
संसद् विघटनको विरोधमा सरकारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको कांग्रेसको दोस्रो चरणको आन्दोलन शनिबारबाट सुरु हुँदैछ । शनिबार सातवटै प्रदेशका ३३० वटै प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रका मुकाममा विरोध प्रदर्शन र सभा हुने प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए ।
१९ पुसमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले दोस्रो चरणको आन्दोलन तय गरेको थियो । दोस्रो चरणमा कांग्रेसले तल्ला तहमा विरोधका कार्यक्रम राखेको छ । पहिलो चरणमा कांग्रेसले यसअघि १३ पुसमा १६५ वटै संसदीय निर्वाचन क्षेत्रमा विरोध कार्यक्रम गरेको थियो ।
पुस २५ गते, २०७७ - ०७:५५ मा प्रकाशित